Suuq geynta dijitaalka ma tahay mid fiican? | Suubbis Blog
Waxaad wax ka oganeysa suuq-galka dijital ah ee ganacsiga iyo sidoo kale CMO.
Waxaad maqashay qof sheegshegayo “suuq-geynta suuq-geynta” waxaana laga yabaa intaad horay fikradda ugu heysatay balse wax badan kama ogid. Waxaane laga yaabaa in aad ka xishooneyso in aad cid weydiiso. Hambalyo, bostigaan waa midkaagi
Machadka Suuq-geynta Macmiilka, kheyraad online oo loogu talagalay macluumaad kasta oo ku
saabsan dhammaan waxyaabaha suuq-galka ah ama la xiriira, wuxuu qeexayaa misaniyada suuq-galinta :
Suuqgeynta Macluumaadka(Content marketing) waa farsamooyin suuq-galin ah oo abuuraya loona qaybiyo waxyaabo
qaali ah, oo ku habboon soona jiidanaya dhagaystayaasha iyo in si cad loo qeexay –
iyada oo ujeedadu tahay in la wado ficil macmiisha faa’iido uleh.
Ereyga muhiimka ah waa qiimo badan. Waa isbedelkan qeexidda mid ka mid ah oo
tilmaamaya nooc kasta oo ah xayaysiis ama suuq-geyn. Waxaad sheegi kartaa haddii qayb ka mid ah
waxyaabaha ay tahay nooca laga yaabo inuu noqdo qayb ka mid ah ololaha suuq-geynta.
VW’s 2014 “Maalinta Ciyaarta” ganacsiga, midkee dada badan arkaan iyadoo oo lagu soo arkay YouTube ku dhawaad 18 milyan jeer markii
qoraal boosti ah aaysoo qoraan, ad, ama kontantiga suuq-geynta (content marketing)? Jawaabtu waa labadaba, iyada oo ku xidhan tahay
hadba sida ay u heshay shaqsi kasta oo soo bandhigo wax. Isla sidaas oo kale ayaa lagu dabaqi doonaa qeyb
kasta oo suuq-geyn ah oo aad sameysid, iyada oo ku xiran tahay haddii qofka wax qatuhu ka helay qiimaha
iyo in kale. Dabcan ujeedadu waa in la bixiyo qiimo ka badan oo ka imaada suuq-geyntaaga macaamiisha ilaa inta aad
ka heli karto dhageystayaal macquul noqan karo. Xaaladdan oo kale, inkastoo ay
tilmaantan iyo sharraxaadaan, waxaad u maleyneysaa inaad weli ka fekereyso waxa dhabta ah ee suuqgeynta tahay.
Waxaan ka heli karnaa caddeyn dheeraad ah adoo tixgelinaya tusaalooyin yar.
Shanta Tusaalooyin oo ah Macluumaadka Suuq-geynta (Content Marketing)
Waxaa jira noocyo badan oo suuq geynaya maaddaama ay jiraan noocyo content ah – oo aad u badan si
aad wax badan ugu ogaato. Ujeedadaydu waxay tahay inaan ku siinno hordhac ah suuq-geynta oo
aad ku fikirto sida Macluumaadka badeeco si aad u aragto fursadaha ku hareeraysan oo dhan. hadii aan dhaho Dhawaan waxaad la imaanaysaa 50 fikradod oo xayeeysis ah maalin kasta. Ma awoodi doontid inaad joojiso aragta fursada
si aad u abuurto content. Halkan waxaad ka heleysaa shan tusaalooyin oo ku caawiyo.
WAAD KA HELIDOONTA
Infographics. Kuwani guud ahaan waa muddo dheer, garaafyada toosan oo ay ku jiraan tirakoobyada(statistics), jaantusyada(charts), garaafyada, iyo macluumaad kale. Haddii aad u baahan tahay tusaalayaal, 197 waxay ku qoran yihiin mawduucyada suuq-geynta waxaane soo qoray, Michael Schmitz, oo ah madaxa Labada lab ee Publicis, Munich.
Infographics waxay noqon kartaa mid waxtar leh in haddii mid ka wanaagsan oo infographics ah waxaa lagu
gudbin karaa warbaahinta bulshada iyo in lagu bosti gareyo websidhyada si sanad la ah on websites sanado.
Waxaad ka heli kartaa naqsada casriyeeysan oo aad ku shaqaaleysid qandaraasle ku yaal goobta sida oDesk ama
haddii aad rabto inaad ka saarto khatarta aad u geli karto shirkad sida Visua.ly.infographic ayaa badanaa
kuugu kacaya ugu yaraan $ 1,000 si loo soo habeeyo, laakiin waxay ku kici kartaa dhowr kun oo doolar
haddii aad shaqaaleysid qandaraasle ama hay’ad si loogu daro istaraatiijiyada iyo qorsheynta, cilmi
baarista, kobiraaydka, iyo naqshadeynta. Waxaa sidoo kale jira arrin kor u qaadaysa in ay kufilan tahay infographic
boogares(bloggers) iyo warbaahinta(media). Ama waxaad samayn kartaa guddi ka mid ah Pinterest iyo ifographics mawduuc la xidhiidha ganacsigaaga. Taasina waa nooc ka mid ah suuq-geynta macaamiisha,
wax kharash ahna maaha, laakiin waa waqtigaaga. Hey, waxay u shaqaysay Michael.
Bogagga. Waa maxay farqiga u dhexeeya websaytka caadiga ah iyo bogga internetka ee ku jira suuqgeynta?
waxaa loo tixgaliyaa midaamka SEO in uu ka imaday moz, oo ah bixiye qalabka SEO iyo kheyraadka la
xiriira. Khayraadkani, oo bilaash ah ayaa lagu soo bandhigay, waxaa la arkayaa malaayiin jeer, oo waxaa uu
keenaya macaamiisha tirada badan oo aan waligood kufilin Moz iyo adeegyada ay bixiyaan. Ama
fiiri daraasad keys isadhi ah oo ka yimaada shirkadda dhisaan ah oo ladhaho Teehan + Lax. Daraasadaha kiisaska intooda badani waa caajis. maraka qaar Daraasaddaha kiiskooda waa mid xiiso leh. Taasi waa farqiga u dhaxeeya si fudud u soo gelitaanka boggaaga internetka, iyo suuq-geynta.
Podcasts. Michael Hyatt, oo ah qoraaga buugga qoraalka ugu wanaagsan ee la iibsado: Ka Fiiri ogeysiska Dunida, oo ku dhaqma waxa uu ku wacdiyo. “Tani waa Noloshadaada” podcast waxaa boogaas la soo daabacay 250,000 jeer bishiiba. Sida Hyatt faahfaahin ka bixisay boostiges blog 4 Sababaha aad u baahan tahay inaad ka fekertid bilaabista Your Podcast Own, “Podcast ayaa ku siinaya aragti ahaan adduunyo gebi ahaanba kala duwan-gaar ahaan. Waxaan haystay dhibco cusub oo dad ah oo sheegaya in aysan waligood maqlin ilaa ay igu dhufteen iTunes. “Hyatt wuxuu bixiyaa macluumaad qiimo leh iyo talooyin ku jira podcast -ka oo dhan. Hase yeeshee, podcast waxay keenaysaa iibsiyo badan oo buugiisa ah, saxiixyada koorsooyinka, iyo codsiyada isaga oo ah afhayeenka.
Fiidiyowyada. Gary Vaynerchuk waa macaamiisha suuq-geynta oo la adeegsanayo fiidiyowga internetka, kaliya fiiri channelkiisa YouTube. Wuxuu bilaabay inuu bilawo fiidiyo si uu u kobciyo dukaanka khamriga ee qoyskiisa iyo fiidiyowyadaas iyo suuqyada kale ee internetka uu ugu dambeyntii u korodhay $ 45M. Fiidiyowyada iyo podcasts waa nooc ka mid ah suuq-geynta suuq-geynta aayaan caadi ahayn, sababtoo ah dadku waxay u maleynayaan inay qaali tahay oo ay adag tahay suuq geynta. Ma aynaan u isticmaalin dime ku saabsan suuqgeynta nooca gaarka ah, ama xitaa waqti badan. 95% guusha aan la kulannay suuq-geynta waxa laga heli karaa qoraallo badan oo aan ku qornay, iyada oo lagu darayo ilaa 20 saacadood shaqo.
Suuqgeynta Macluumaadka sidoo kale waxay bixisaa faa’iidooyin dheeraad ah oo ku saabsan in ay taageerto kanaalada kale ee suuqa. Waxay bixisaa siyaabo dheeraad ah oo loogu talagalay suuq-geynta warbaahinta bulshada waxayna gacan ka geysaneysaa dadaalka SEO iyada oo dhalinaysa xiriirrada dabiiciga ah ee soo galaya iyo in la abuuro waxyaabo wanaagsan oo ku jira boggaaga internetka kaas oo
laga helo makiinadaha raadinta. Xaqiiq ahaan, shirkado badan oo badan oo ka mid ah dadaaladooda SEO waa in ay diirada saaraan suuq-geynta.
Sidee Ayaan Bilaabayaa suuq qeynta dijitalka ah?
Waxaa jira shirkado fara badan oo bixiya adeegyada suuq-geynta, inta badan lagu duubo SEO ama PR. Haddii aad si aad ah ugu mashquulsan tahay inaad adigu sameysid oo aadan diyaar u ahayn inaad ku maamulato adigo guriga dhexdeeda jooga, ka dibna shaqaaleynta shirkad waxay noqon kartaa ikhtiyaarkaaga ugu fiican. Laakiin haddii aad rabto inaad booddo oo aad samayso suuq-gaayn , habka ugu fudud ayaa ah inaad bilawdo in aad qorta baloogis. Waxay u badan tahay inay adadkaato marka ugu horeysa, laakiin inta badan aad waxwanagsan sameyso, si ka wanaagsan ayaad ku heli doontaa. Ka dib talooyin ka yimid bogagga shabakada sida Copyblogger waxaad si dhakhso leh u baran doontaa sida loo samaysto nuxurka boggaaga ama blogka kaas oo ku soo biiri doona akhristayaasha oo u leexinaya macaamiisha ama kalaytiga. Laakiin marka farsamo ahaan istimaleyso tignolijiyad hormarsan iyo qoraale wanaagsan iyo mowduucya xasaasi ah wey ku caawin karaan, maaha furaha lagu abuurayo wax weyn oo ah qaabka ugu fiican ee suuq-geynta.
Haddii aad waligaa ku qaladi jirtay habka aad u akhrido adigoo akhrisanayo qayb ka mid ah suuq-geynta oo keliya adigoo dhameystiran, hadii sidaa suuq geynta ku gaso ka dibna waxaad la kulantay suuq-geyn xun. Marka aan la hadlayo shirkadaha ku saabsan suuq-geynta macmiilka waxaan u sheegaa in sheekadu fiicantahay haddii ay si dhab ah u doonayaan inay akhriyaan. Mawduuc waa weyn haddii ay diyaar u yihiin inay lacag bixiyaan. Haddii aad rabto inaad aragto tusaalooyin muhiim ah oo ku saabsan mawduuca, kaliya fiiri waxa aad bixisay si aad u akhrido, u daawato, ama dhegaysato waqtiyadii dambe. Haddii aad daawatay Lego Movie sanadkan, waxaad aragtay mid ka mid ah tusaalooyinka ugu weyn ee suuq-geynta suuq-geynta ilaa taariikhda. Oh, waxaad u maleysay inay sameeyeen filimkaan si loo iibiyo tikidhada? Mar labaad ka fikir. Taasi waxay ahayd 100 daqiiqo oo lagu ciyaaro kubada cagta, halkii ay isticmaali lahayd DVR si aad uga gudubto waxaad bixisay lacag fiican si aad u daawato. Miyuu jiraa isbeddel ah in Lego dhawaan Mattel, abuurayaasha Barbie, si ay u noqdaan shirkadda ugu weyn ee lagu ciyaaro adduunka? Laga yaabaa inaadan haysan miisaaniyadda si aad u sameyso filin muuqaal ah si aad kor ugu qaaddo shirkaddaada, laakiin waxaad weli siin kartaa macaamiisha iman kara macluumaad qiimo leh.
# 1 sirta Suuq-geynta Macmiilka
Ku dar qiimo.sirtu waa Taas. Dhab ahaantii sirtu ma ahan oo kiya intaan. Waxaan horay uga wada hadalnay qeybakamid ah.